Global Voices teny Malagasy · 1 Avrily 2008
01 Avrily 2008
Tantara tamin'ny 01 Avrily 2008
Iran : Tendrombohitra miezinezina
Iràna01 Avrily 2008
Sangany amin'ireo blaogin-tsary Iraniana i Kosoof, manapariaka ny sarin'ny tendrombohitra miezinezina antsoina hoe Damavand : Mount Damāvand (Persian: دماوند ) also known as Donbavand, is a dormant volcano and the highest peak in Iran with a special place in the Persian mythology and folklore. “Ny tendrombohitra Damāvand (Persiana: دماوند )...
Libya : Inona loatra no dia itiavanao an'i Libya ?
Libia01 Avrily 2008
Mpakasary Libyana i A. Adam izay manapariaka sarina hazondrofia an-tany hay no sady manontany : this is Libya just like a palm tree in the desert. just one question for libyan people like me, what makes u love Libya??? “Indro toy ny hazondrofia an-tany hay i Libya. Fanontaniana tokana no...